स्वास्थ्य – Page2– Ruru FM
अहिले देशभर चिसो बढ्दै गएको छ, केही साधारण कुरामा ध्यान दिए धेरै रोगबाट जोगिन सकिन्छ ।
अहिले देशभर चिसो बढ्दै गएको छ । चिसो बढेसँगै चिसोले बिरामीहुनेको संख्या बढेको छ । अहिले अस्पतालहरुमा धेरै दमका बिरामीहरु भर्ना भएर बसिरहनु भएको छ । बिरामीको संख्या पनि बढिरहेको छ । चिसोको बेला बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई धेरै नै…
दहि खाानुका अनगिन्ति फाइदा, जसले ठिक पार्छ छाला देखि मुटु रोग
दहीमा भुटेको जिरा पिसेर हाली त्यसमा अलिकति नुन र मरिच हालेर बिहान खाएमा खाना राम्रोसँग पच्छ । टाउको दुखाइ हटाउँछ बिहान सूर्योदयसँगै टाउको दुखाइ बढ्दै जाने समस्या छ भने सूर्योदयअघि दहीसँग भात मुछेर खाने गरेमा टाउको दुखाइ कम हुन्छ ।…
पिसावले पोल्छ ? बेलैमा ख्याल गरौं पछि नि सन्तान पनि हुन सक्छ
काठमाडौँ – चिसो मौसममा भन्दा गर्मी मौसममा पिसावले पोल्ने समस्या धेरैलाई हुने गरेको छ । हामीले सिधा रुपमा बुझ्दा हाम्रो शरिरमा पानीको मात्रा कमी हुदा यस्तो समस्या आउन सक्छ भन्ने बुभm्दछौ । तर लामो समय सम्म पिसाव रोक्दा,पिसाबमा आएको…
पाँच वा त्यो भन्दा बढी बच्चा जन्माउने अविभावकलाई एक वा दुई बच्चा जन्माएकालाई भन्दा बढी मुटु रोगको खतरा हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । “यसअघिका धेरै अध्ययनलाई महिलाको प्रजनन् क्षमतासँंग सम्बन्धित गराइएको थियो, ती अध्ययनमा पहिलो बच्चा…
बढीमात्रमा व्यस्त जीवनशैली, अस्वस्थकर खाना र व्यायाम नहुँदा दैनिक अनेकन रोगका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । दैनिक ३० मिनेटमात्रै योग गर्ने हो भने जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले औंल्याइसकेको छ । आज हामी योग किन…
पानीको कमीले शरीरमा देखिने यी हुन् ७ समस्या (पुरा पढ्नुहोस)
एजेन्सी । पानी हाम्रो शरीरमा चाहिने अत्यावश्यक पदार्थ हो । करिब ७० प्रतिशत मानव शरीर पानीबाट नै बनेको हुन्छ । स्वस्थ रहन शरीरमा पानीको मात्रा कायम राख्न आवश्यक छ । यद्यपि, शरीरमा विभिन्न कारणले पानीको कमी हुन्छ । मिर्गौैलामा समस्या को…
कलेजोमा रोग लागेको पछिसम्म पनि थाहा नहुन सक्छ। कलेजो ७०–८० प्रतिशतसम्म बिग्रँदा पनि कतिपय अवस्थामा कलेजो रोगको लक्षण वा समस्या नदेखिन सक्छ । कलेजोको रोग लिभर सिरोसिसलाई ‘लिभर फेलियर’ भनेर बुझ्न सकिन्छ । सिरोसिस भनेको ‘कलेजो फेल’ भएको…
के होत मुटु रोग ? कसरी बच्न सकिन्छ ??
मानव शरीरका अङ्गहरुमध्ये मुटु जटिल प्राकृतिक अङ्ग हो । यो हरपल चलिरहन्छ । छातीभित्र धडकिरहने यो सानो अङ्गले शिरदेखि पैतालासम्म महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको हुन्छ । विश्व व्यापी रूपमा भइरहेको औद्योगीकरण र मानव जीवनमा भइरहेको जीवनशैलीको…
यी हुन् मुटु रोगका लक्षण र घरेलु उपचारहरू !
पहिले–पहिले मुटु रोगलाई वृद्धवृद्धा मानिसहरूको रोग मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा मुटु रोग किशोर तथा युवा अवस्थाकै मानिसहरूमा समेत डरलाग्दो गरी फैलिएको पाइन्छ । मुटु रोग विश्वमा धेरै मानिसको ज्यान लिने प्रमुख रोग हो । त्यसकारण यसप्रति सावधान…
लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा निःशुल्क मिर्गौला डाइलाइसिस सेवा सुरु !
लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा निःशुल्क हेमोडाइलाइसिस सेवा सुचारु भएको छ। विश्व मिर्गौला दिवसको अवसर पारेर बिहीबार हेमोडाइलाइसिस सेवाको शुभारम्भ गरिएको हो। लुम्बिनी मेडिकल कलेज, आरोग्य फाउण्डेश ललितपुर र रोटरी क्लव अफ पाल्पाको संयुक्त पहलमा…